May Nyane: တကယ်ဆို အချိန်ပဲ လိုတယ်…..
I admire busy women life
ဆရာမက အခုလို တနေ့တာ အချိန်တွေကို ချပြလိုက်ပြီး အိပ်ချိန်တောင် တနေ့ ၃ နာရီထဲ ဆိုတော့... အင်း... ဆရာမရေးမယ့် ကျမရဲ့ ချစ်ခြင်းများ.. ဘယ်တော့ဖတ်ရမှာလဲ လို့ မေးမလို့ဟာ မေးတော့ပါဘူးလေ... နော်...
ဆရာမ နေကောင်း ကျန်းမာစွာနဲ့ လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ဖို့ အချိန်တွေ ပိုလာပါစေ... အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းသွားပါတယ်...း))
ခုမှဒီလိုလေပြေပြန်ထိုးတော့ ဘယ်ရမှာလည်း ဆရာမရယ်၊ ကြားစကားတွေ ယုံပစ်လိုက်ပြီ။
နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ် မမေငြိမ်း ... east code
မှာနေတဲ့သူအချင်းချင်း ဖြစ်တာရယ် ... မိခင်တယောက်
ဖြစ်နေကြတာရယ် ... ပိုလို့တောင် ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ... အမ တို့လို အလုပ်ချိန်က နေ့ဖက်ဖြစ်လိုက် ညဖက်ဖြစ်လိုက် နဲ့ ဆို ပိုတောင်ဆိုးပါသေးတယ် ... အဲလိုကြီး အချိန်မတူတဲ့ အလုပ်လုပ်ရက်တွေမှာ အိပ်လို့ရော ရ ရဲ့  လားလို့ တွေးမိသေးတယ် ...
၀မ်း တူး သရီး
ဆရာမမေငြိမ်းရေ ၀ါရှင်တန်အသံလွှင့်က လူတွေအဲလောက်အလုပ်ရှုပ်တယ်လား ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံရေဒီယိုအသံလွှင့်ကလူတွေ ထက်ကိုပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒီမှာကတော့ အစီအစဉ်တွေအရမ်းများတော့ တစ်ယောက်ချင်းစီကြားမှာ နားချိန်လေးတွေရ တယ်လေ။ နောက်ပြီး သတင်းကလည်း အသံလွှင့်ဌာနတွေက နေပြည်တော်အသံလွှင့်ဌာနကပေးတာကိုပဲ ပြန်လွှင့်တာဆိုတော့ သီချင်းပိုင်းနဲ့ စာအုပ်စင်ကဏ္ဏတွေ အင်တာဗျူးတွေ တခြားအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပဲ လွှင့်ရတော့ သူ့အပိုင်းနဲ့သူလုပ်ရတာလေ။ အဲတော့ အော်ဒီယိုအင်ဂျင်နီယာကလွဲရင် အနောင့်ဇာတွေက နားချိန်လေးတွေရပါ တယ်။ ဆရာမကိုလည်း ကျွန်တော် လင့်ခ်ချိတ်ထားလိုက်ပြီဗျ။ ကျေးဇူးနော်....
ဟုတ်တယ်နော် တနေ့ကို ၂၄ နာရီအစား ၄၈နာရီလောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ မဆိုးဘူးထင်တယ်နော် တီချယ်... :P
The time diff. between you and the readers is dosen't matter.
You stayed in the same place as stationary.(Fixed time)
There is difficult, if you want to contact me.
I've gone everywhere in the world day by day.
အချိန်ကို management လုပ်နိုင်မှုအတွက်
Su.. ဟုတ်တယ်.. အမလည်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေရတာကို ကြိုက်တယ်။ :)
အဲလောက် နည်းတဲ့အချိန်တွေထဲကပဲ လုပြီး ရေးဦးမှာပါ။
လေပြေထိုးတာလား ဘာလား မသိပါဘူး.. ကျမကတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်တာပဲ .. :P
သေချာတာပေါ့.. တခါတလေ ည ၁နာရီလောက်ထိ အိပ်မပျော်လို့ နောက်မနက် ၃နာရီထတော့ ခေါင်းတွေမူးပြီး ကော်ဖီတွေ ပြင်းပြင်းဖျော်သောက်.. ဒါနဲ့ပဲ ရင်တွေတုန်...။ ပြောတော့ပါဘူး.. :)
ရွာသားလေး .. ဟယ်လို.. ဟယ်လို .. ကြားရင် အကြောင်းပြန်.. ဒါပဲ။
မြန်မာပြည်က သတင်းဌာနနဲ့တော့ တူဝူးလေကွယ်..။ တူတို့ကတော့ သတင်းလို့ဆိုသော အရာများက အသင့်စောင့်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသကိုး :P
သဘောပေါက်ြီ့းသားပါနော်.. တူတူ တူတူတွေ .. အဟင့် :(
တကွေ့ကွေ့တော့ တွေ့ကြသေးတာပေါ့လေ.. ဟဲဟဲ..။
ကြည်ဖြူပိုင်.. ဒီလိုပဲ ရအောင် အချိန်လုရတာပါပဲ..။ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆိုသကိုး :D
အားတဲ့သူတွေကိုလည်း အားကျပါတယ်။ အဲလို စာရေးချိန်လေး များများရချင်ပါတယ်။ :)
အစ်မရေ...ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးပြီးချင်း တော်တော်မောသွားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မိသားစုနဲ့အတူတူရှိနေရတာလေးကြောင့် တော်သေးတာပေါ့နော်.. အဲဒီလို အချိန်တွေကြားထဲက လာရေးသွားတဲ့ ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးတင် အားနာရပါတယ် အစ်မရေ...
အစ်မ စာရေးဖို့ အချိန်တွေအများကြီး ရပါစေ..